Maamulka Gobalka Amxaarada Itoobiya oo xirxiray dad rayid ah kadib markii ay isku dhaceen ciidamada.
Friday August, 17 2018 - 05:18:32
Friday February 02, 2018 - 11:12:24 in by salman abdi
Maamulka Gobalka Amxaarada Itoobiya ayaa sheegay in tiro badan oo rayid ah loo xiray doorka ay ku lahaayeen rabshadaha dilaaga ah kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof usbuucii la soo dhaafay.
Warbaahinta ay dawladu maamusho FBC iyo wakaalada gaarka loo leeyahay ee Addis Standard news portals ayaa sheegay in xisbiga maamulaya gobolka, (ANDM), ay shaaca ka qaadeen tallaabooyinka ka dib shir uu yeeshay guddiga dhexe.
Rabshadaha looga soo horjeedo dawlada ayaa ka bilawday saddexda magaalo ee Woldiya, Kobo iyo Mersa ee gobolka Amhara oo ah kan labaad ee ugu weyn dalkaasi Itoobiya. waxaana arrintaasi loo aaneynayaa dhacdadii Woldiya oo keentay in ay bulsha weynta ku dhaqan deegaanada Kobo iyo Mersa taageera u muujiyaan.
Inkasta oo tirada saxda ah ee la xiray aan la ogeyn, ilaaliyeyaasha siyaasadeed ayaa la yaabay sababta ayan tallaaba sharci looga qaadin ciidamada ammaanka oo xoog u isticmaalay dadka rayidka ah ee aan hubaysnayn.
Itoobiya:- Maxaa Ka Jira In 40 Qof Ay Dileen Ciidanka Liyuu Police,Dhacdo Xanuun Badan
16/08/2018 - 13:04:15